RW.Cumar Cabdirashiid oo Muqdisho dib ugu laabtay – Radio Daljir
Juunyo 2, 2015 6:18 b 0
Talaado, Juun 02, 2015 (Daljir) —Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Cumar Cabdirashid Cali Sharmarek iyo wafti uu hogaaminayo ayaa saaka dib ugu soo noqday magaalada Muqdisho.
Ra’iisul Wasaaraha iyo Waftigiisa ayaa ku sugnaa labadii maalmood ee la soo dhaafay degmada Cadaado oo uu ka socdo shirka maamul u samaynta Gobolada Dhexe, waxaana Ra’iisul Wasaaruhu kulamo la soo qaatay Gudiga Farsamada, Odayaasha Dhaqanka, Siyaasiyiinta, Ururada Haweenka iyo madax ka tirsan maamulka Ximin iyo Xeeb.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa sheegay in howlo badan oo muhim u ahaa geedi socodka dhismaha maamulkan ay qabsoomeen isagoo mahadcelin u jeediyey maamulka Ximan iyo Xeeb oo marti galiyey qabsoomida shirka Cadaado.
R/Wasaaraha ayaa saaka la kulmay guddiga farsamada shirka maamul u sameynta Gobollada Dhexe, waxana halkaas ka hadashay Guddoomiyaha guddiga Marwo Xaliimo Yarey oo R/Wasaaraha uga warbixisay shaqooyinka u qabsoomay guddiga iyo kuwa ka dhiman, waxana sidoo kale R/Wasaraha aya sheegay in guddiga laga sugayo dhameystirka iyo sixida howlaha shirka, isla markaana xukuumadu ay garab taagan tahay.
DHAGAYSO: Barnaamijkii Saaka iyo Dunida _Arbaco 03